डेनमार्क भर्सेस चेक : दुई अन्डर डगबीचको भिडन्त, काे पुग्ला सेमिफाइनल ? | सबै खेल
डेनमार्क भर्सेस चेक : दुई अन्डर डगबीचको भिडन्त, काे पुग्ला सेमिफाइनल ?
१९ असार २०७८, शनिबार १३:५५
जारी युरोकपको क्वार्टरफाइनलमा आज राति समानस्तरका दुई टिम डेनमार्क र चेक रिपब्लिक भिड्दै छ। अप्रत्यासित रुपमा क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेका यी दुई टिमबीचको राति ९ः४५ बजे अजरबैजानको बाकुमा हुनेछ।
डेनमार्क समूह बीको उपविजेताका रुपमा अन्तिम १६ पुगेको थियो भने चेक समूह डीमा तेस्रो हुँदै अन्तिम १६मा पुगेका थियो । अन्तिम १६मा डेनमार्कले वेल्सलाई ४–०ले हराएको थियो भने चेकले उपाधि दाबेदार टिम नेदरल्यान्ड्सलाई २–०ले हाराएको थियो।
सन् १९९२ मा उपाधि जितेयता पहिलो पटक क्वार्टरफाइलन पुगेको डेनमार्क त्यही सफलता दोहो¥याउन चाहन्छ। यता, चेकको चाहना पनि त्यही छ । सन् २००४ पछि पुनः सेमिफाइनल खेल्ने उसको चाहना छ।
समूह चरणको सुरुआती दुई खेलमा फिनल्यान्ड र बेल्जियमविरुद्ध हार बेहोरेपछि डेनमार्क प्रतियोगिताबाट बाहिरिने डरबाट गुज्रेको थियो । त्यसमाथि पहिलो खेलमा स्टार खेलाडी क्रिस्टियन एरिक्सनलाई मैदानमै हृदयघात भएपछि टिमको प्रदर्शन पनि ओझेलमा परेको थियो ।
कोपनहेगनका आफ्ना समर्थक अगाडि डेनमार्कले समूह ‘बी’ को अन्तिम खेलमा रुसलाई ४–१ ले हरायो । यस जितले डेनमार्क समूहको दोस्रो स्थानमा रह्यो । त्यसपछि उसले अन्तिम १६ मा वेल्सलाई आम्स्ट्रडममा वेल्सलाई ४–० ले हराएको थियो ।
सन् २००४ मा डेनमार्क अन्तिम पटक ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा युरोको क्वाटरफाइनल पुगेको थियो । डेनमार्क प्रमुख प्रतियोगितामा पछिल्लो पटक क्वाटरफाइनल पुगेको युरो २००४ मा हो, जहाँ टोली पावेल नेडभेडको प्रेरणा र मिलानको २ गोलबाट प्रेरित चेक गणतन्त्रसँग ३–० ले पराजित भएको थियो ।
चेक र डेनमार्क अलिहेसम्म ११ पटक आमने सामने भएका छन् । जसमा ३ खेल चेकले जितेको छ भने २ खेल डेनमार्कले जित्दा ६ खेल बराबरीमा सकिएको छ।
विगत जे भएपछि दुवै टिम ‘टिम गेम’ खेल्दै क्वार्टरफाइनलको यात्रा तय गरहेका छन् । दुवै टिममा स्टार खेलाडी छैनन् । त्यसैले चेक र डेनमार्कबीचको खेल हेर्नलायक हुनेछ।
Tags: Czech Rebublic, Denmark, Euro cup 2020
पराग्वेलाई पेनाल्टीमा हराउँदै पेरु कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनलमा
एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि पहिलो चरणमा १८ खेलाडी छानिए